Samuel Nhoma a Edi Kan 18:1-30
Dawid ne Yonatan bɛyɛɛ nnamfo (1-4)
Dawid nkonimdi maa Saul ani beree no (5-9)
Saul yɛe sɛ anka ɔrekum Dawid (10-19)
Dawid waree Saul babea Mikal (20-30)
18 Bere a Dawid ne Saul kasa wiei ara pɛ, Yonatan+ bɛpɛɛ Dawid asɛm, na wɔbɛyɛɛ nnamfo paa.* Yonatan dɔɔ no sɛ n’ankasa ne ho.*+ 2 Efi saa da no, Saul maa Dawid tenaa ne nkyɛn, na wamma wansan ankɔ ne papa fi.+ 3 Na Yonatan ne Dawid yɛɛ apam,+ efisɛ ɔdɔɔ no sɛ n’ankasa ne ho.*+ 4 Yonatan yii n’ataade nsasin a ɛhyɛ no no maa Dawid, na ɔde n’akotaade, ne sekan, n’agyan ne n’abɔso* nso maa no. 5 Dawid dii ako, na baabiara a Saul somaa no no, esii no yiye.*+ Enti Saul de no too mmarima a wodi ako no ano,+ na ɔman no nyinaa ne Saul nkoa nso ani gyee ho. 6 Bere biara a Dawid ne mmarima a wɔaka no bɛkɔ akokunkum Filistifo no, sɛ wɔresan aba a, mmea fi Israel nkurow nyinaa mu de nnwom+ ne asaw ne mpintin+ ne ahurusi ne asankuwa behyia Ɔhene Saul. 7 Sɛ mmea no redi ahurusi a, na wɔbɔ gye so sɛ: “Saul akum apem,Na Dawid akum mpem du.”+ 8 Saul bo fuwii paa,+ efisɛ n’ani annye nnwom no ho, enti ɔkae sɛ: “Wɔde mpem du ama Dawid; me de, apem na wɔde ama me. Nea aka ara ne sɛ wɔde ahenni no bɛma no!”+ 9 Efi saa da no, Saul nyaa Dawid ho adwemmɔne. 10 Ade kyee no, Onyankopɔn maa honhom bɔne baa Saul so,+ na ofii ase yɛɛ n’ade basabasa* wɔ ofie hɔ. Saa bere no, na Dawid de ne nsa rebɔ sanku+ sɛnea ɔtaa yɛ no, na na Saul kura peaw.+ 11 Na Saul tow peaw no,+ na ɔkae sɛ: “Mede bɛwɔ Dawid afam dan ho!” Ɔtow no mprenu, nanso emu biara, Dawid guanee. 12 Afei Saul suroo Dawid, efisɛ na Yehowa di n’akyi.+ Nanso Saul de, na wapo no.+ 13 Enti Saul ma ofii ne nkyɛn, na ɔyɛɛ no apem so panyin, na daa, na Dawid di asraafo no anim ne wɔn kɔ ɔko.*+ 14 Nea Dawid yɛe nyinaa, esii no yiye,*+ na Yehowa dii n’akyi.+ 15 Bere a Saul hui sɛ asi no yiye no, afei na osuro no. 16 Nanso na Israel ne Yuda nyinaa dɔ Dawid, efisɛ na odi wɔn anim kɔ ɔko. 17 Akyiri yi, Saul ka kyerɛɛ Dawid sɛ: “Hwɛ, me babea panyin Merab+ ni. Ɔno na mede no bɛma wo aware.+ Nanso akokoduru a wode asom me no, mepɛ sɛ wotoa so saa ara na woko ma Yehowa. ”+ Nea ɛwom ne sɛ, na Saul aka wɔ ne tirim sɛ: ‘Me de, meremfa me nsa nka no, Filistifo na wobekum no.’+ 18 Ɛnna Dawid ka kyerɛɛ Saul sɛ: “Mene hena, na me papa abusua nso yɛ dɛn wɔ Israel na mabɛyɛ ɔhene ase?”+ 19 Nanso bere dui sɛ wɔde Saul babea Merab ma Dawid no, na wɔama Adriel+ a ofi Mehola no aware no dedaw. 20 Ná Saul babea Mikal+ pɛ Dawid, na bere a wɔkaa ho asɛm kyerɛɛ Saul no, ɛyɛɛ no dɛ. 21 Nea Saul kae ne sɛ: “Mede no bɛma no, na asum no afiri, sɛnea ɛbɛyɛ a Filistifo no benya no.”+ Enti Saul san ka kyerɛɛ Dawid sɛ: “Ɛnnɛ mepɛ sɛ mede me babea ma wo aware.”* 22 Afei nso, Saul ka kyerɛɛ ne nkoa sɛ: “Monkɔka nkyerɛ Dawid kokoam sɛ: ‘Hwɛ! Ɔhene pɛ w’asɛm, na ne nkoa nyinaa dɔ wo. Enti bɛware ɔhene babea.’” 23 Bere a Saul nkoa bɛkaa nsɛm yi kyerɛɛ Dawid no, Dawid kae sɛ: “Ohianiwa te sɛ me a mensɛ hwee yi, mene hena na mayɛ ɔhene ase?”+ 24 Na Saul nkoa no kɔkaa nsɛm a Dawid kae no kyerɛɛ no. 25 Ɛnna Saul kae sɛ: “Monkɔka nkyerɛ Dawid sɛ, ‘Ɔhene rennye tiade+ biara, na mmom fa adanse bɛkyerɛ no sɛ woakum Filistifo mmarima 100,*+ na fa tua ɔhene atamfo so ka.’” Nanso na Saul pɛ sɛ ɔfa kwan bi so ma Filistifo no kum Dawid. 26 Enti ne nkoa no kɔkaa nsɛm yi kyerɛɛ Dawid, na Dawid ani gyee ho sɛ ɔbɛyɛ ɔhene ase.+ Bere no nnya nsoe no, 27 Dawid ne ne mmarima kokunkum Filistifo 200, na Dawid de adanse bɛkyerɛɛ ɔhene sɛ wɔawuwu, na ɔbɛyɛɛ ɔhene ase. Enti Saul de ne babea Mikal maa no aware.+ 28 Saul hui sɛ Yehowa di Dawid akyi,+ na ne babea Mikal nso dɔ no.+ 29 Eyi maa Saul suroo Dawid paa, na Saul nna a aka nyinaa, Dawid bɛyɛɛ ne tamfo.+ 30 Ná Filistifo akunini taa fi adi bɛko, na da biara a wɔbɛba no, na Dawid di wɔn so nkonim* sen Saul nkoa nyinaa,+ na ogyee din paa.+
^ Anaa “Yonatan kra fam Dawid kra ho.”
^ Anaa “ɔde nyansa yɛɛ ade.”
^ Anaa “te sɛ odiyifo.”
^ Nt., “odii ahyɛmfiri wɔ ɔman no anim.”
^ Anaa “Mepɛ sɛ wobɛyɛ m’ase.”
^ Anaa “fa Filistifo mmarima 100 dua ano were bra.”
^ Anaa “de nyansa yɛ ade.”